महालक्ष्मी विकास बैक भित्र ७ करोडको सुन धितो कर्जा काण्डः का.मु. सीइओ शर्मा सहित उच्च दर्जनौ कर्मचारीहरुको संलग्नता भएको सीआईबीको आशंका ! - Aathikbazarnews.com महालक्ष्मी विकास बैक भित्र ७ करोडको सुन धितो कर्जा काण्डः का.मु. सीइओ शर्मा सहित उच्च दर्जनौ कर्मचारीहरुको संलग्नता भएको सीआईबीको आशंका ! -
easy creative writing prompts i do my homework que significa en castellano where to get help writingabusiness plan essay benefit of doing volunteer work creative writing describe face mfa creative writing results university of chicago creative writing program creative writing 2019 creative writing computer programs creative writing editing jobs jobs withamajor in creative writing how to get marks in creative writing pitch writing service reward chart for doing homework university of central florida mfa creative writing pay for someone to do homework metaphor creative writing creative writing study normal and inverted word order in creative writing creative writing department uncw creative writing sentence starters ks3 write my essay conclusion will writing service in newport gwent mfa creative writing philadelphia ann arbor mfa creative writing i need help with my business plan creative writing stories about nature peppa pig doing homework right essay for me creative writing self hypnosis
महालक्ष्मी विकास बैक भित्र ७ करोडको सुन धितो कर्जा काण्डः का.मु. सीइओ शर्मा सहित उच्च दर्जनौ कर्मचारीहरुको संलग्नता भएको सीआईबीको आशंका !
नेपालको एउटा विकास बैंक छ जहाँ सधैं घोटला र विवाद भइरहन्छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । विभिन्न विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी मर्जर भएर बनेको महालक्ष्मी विकास बैंक भित्र ७ करोड भन्दा बढिको नक्कली सुन धितो कर्जा काण्डको छानवीन सीआईबीमा पुगेको फेला परेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ९० दिन भित्र सीइओ बनाउनु पर्ने निर्देशन नै जारी गरेको छ । तर, यो निर्देशन महालक्ष्मी विकास बैंकमा कहिले लागेन र लाग्दैन पनि भन्दा फरक पर्दैन ।
महालक्ष्मी विकास बैंक जहाँ सक्षम र अनुभवी सीइओहरुलाई टिक्न गाह्रो हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन । केही महिना अगाडी सीइओ कृष्ण राज लामिछानेले राजिनामा दिए । अहिले ५ महिना भन्दा बढि भयो । बैंकमा सीइओ पद खाली छ । राष्ट्र बैंकले ९० दिन भित्र सीइओ बनाउनु पर्ने निर्देशन नै जारी गरेको छ । तर, यो निर्देशन महालक्ष्मी विकास बैंकमा कहिले लागेन र लाग्दैन पनि भन्दा फरक पर्दैन ।
कर्जा प्रवाहमा कमिशन चक्कर देखि कर्मचारी भर्नामा समेत बोर्ड सदस्यहरुले हस्तक्षेप गरेपछि महालक्ष्मी विकास बैंक धरासायी बन्दै गएको भेटिएको छ । हालै महालक्ष्मी विकास बैंकको ललितपुरको कुमारीपाटी शाखाबाट ७० किलो सुन नक्कली सुन धितो राखी ७ करोड भन्दा बढि पैसा घोटला भएको भेटिएको छ । सो शाखाबाट नक्कली सुन धितो राखी ७ करोड कर्जा दिएको नेपाल प्रहरीको सीआईबीले फेला पारेको हो । गर्भनर साब ?
सीआईबी उच्च स्रोतले पंक्तिकारसंग भन्योः– यति ठूलो घोटला काण्डमा बैंकका सीइओ सहित उच्च कर्मचारीको संलग्ना बारे हामी छानवीन गर्दैछौं । तत्काल सीआईबीले ३ जना ऋणीलाई मात्रै पक्राउ गरेपनि केही दिन भित्र केही उच्च कर्मचारी समेत पक्राउ पर्ने बताएको छ ।
सीआईबी उच्च स्रोतले भन्योः– जनताको डिपोजिटबाट यति ठूलो पैसा शाखा मेनेजरबाट मात्रै स्वीकृत भएको छैन । बैंक उच्च कर्मचारीले समेत हस्ताक्षर गरेका कारण अब कर्मचारीलाई पनि छानवीनको घेराउमा राखिने छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकको ललितपुरको कुमारीपाटी शाखाबाट ७० किलो सुन नक्कली सुन धितो राखी ७ करोड भन्दा बढि पैसा घोटला भएको भेटिएको छ । सो शाखाबाट नक्कली सुन धितो राखी ७ करोड कर्जा दिएको नेपाल प्रहरीको सीआईबीले फेला पारेको हो । गर्भनर साब ?
सधैं विवाद र घोटला हुँदै आएको महालक्ष्मी विकास बैंक भित्र फेरि डरलाग्दो नक्कली सुनकर्जा काण्डमा फसेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन ।
भनिन्छ नक्कली सुन राखेर करोडौं कर्जा प्रवाह भएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले महालक्ष्मी विकास बैंकको ललितपुरस्थित कुमारीपाटी शाखाबाट ३ जना ऋणीलाई पक्राउ गरेको भेटिएको छ । बैंकले नक्कली सुन राखेर ७ करोड कर्जा प्रवाह गरेको सिआईबीका प्रवक्ता बेलबहादुर पाण्डेले आर्थिक बजार न्यूज डटकमसंग बताए ।
ऋणीले ७० केजी नक्कली सुन बैंकमा राखेको कागज बनाएर ७ करोड कर्जा लिएको थियो । बैंकका उच्च कर्मचारीहरु समेतको मिलेमतोमा नक्कली सुन राखेर यसरी करोडौं कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । सिआईबीलाई प्राप्त उजुरीको आधारमा छानविन गर्दा नक्कली सुन राखेर कर्जा लिने ३ जना पक्राउ परेका छन् ।
सिआईबीका प्रबक्ता बेल बहादुर पाण्डेका अनुसार गतवर्ष बैंक अफ काठमाण्डूको नक्कली कर्जा कण्डमा बैंकका सीइओ सहित उच्च कर्मचारी समातिएपछि बैंकले आफ्ना कर्मचारी पर्ने डरले गोप्य राख्ने गरेको देखिन्छ ।
सिआईबी प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार सुन जाँचकी गर्ने व्यक्ति फरार रहेका छन भने, सुन कर्जामा घोटाला भएपछि राष्ट्र बैंकले छानविनको लागी सिआईबीलाई आग्रह गरेको थियो । यस घोटलामा बैंकका उच्च कर्मचारी समेत समातिने संभावना रहेको देखिन्छ ।
सिआईबीका प्रबक्ता बेल बहादुर पाण्डेका अनुसार गतवर्ष बैंक अफ काठमाण्डूको नक्कली कर्जा कण्डमा बैंकका सीइओ सहित उच्च कर्मचारी समातिएपछि बैंकले आफ्ना कर्मचारी पर्ने डरले गोप्य राख्ने गरेको देखिन्छ । जनताको डिपोजिट माथी घोटला गर्ने जो कोही भए पनि छानवीन गरी कठघरामा ल्याउनु जरुरी छ । सचेत भया ।
बैंक अफ काठमाण्डूको डिबेञ्चर २०८६ को सार्वजनिक
सशस्त्र प्रहरी हवल्दार निलम्बित
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र भाटभटेनी मनी ट्रान्सफरबीच सम्झौता
दलहरुकै कारण गणतन्त्र असफलको मार्गतर्फ
बालबालिकाले चिनियाँ भाषामा सीको स्वागत
अजोड इन्स्योरेन्सले आईपीओ निष्कासन गर्दै
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्व प्रवन्धक सहित अन्य ७ जनालाई साढे ९ करोड बिगोसहित आरोपपत्र दर्ता
हिमालयन बैंकले विदेशी मुद्राको निक्षेपको ब्याज दर घटायो